UPDATE: Toban Al-Shabaab ah oo lagu qabtay Toora-Toorow & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Toban Al-Shabaab ah oo lagu qabtay Toora-Toorow & Wararkii ugu dambeeyay
UPDATE: Toban Al-Shabaab ah oo lagu qabtay Toora-Toorow & Wararkii ugu dambeeyay
Toora-Toorow (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya Deegaanka Toora Toorow ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in lagu qabtay toban ka mid ah maleeshiyada Ururka Al-Shabaab.
Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin, Taliyaha Guutada 16aad ee Ciidanka Kumaandooska Danab ayaa xaqiijiyay inay gacanta ku dhigeen toban nin oo ka tirsan Al-Shabaab, uuna ku jiro Gudoomiyihii Maxkamadda Al-Shabaab ee Gobolka Shabellaha Hoose, Macalin Abuukar.
Gaashaanle Maalin ayaa ka dhawaajiyay in ay sii wadi doonaan gulufka militari ee Ururka Al-Shabaab looga saarayo dhulka ay kaga sugan yihiin Gobolka Shabellaha Hoose.
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Ibraahim Aadan Cali (Najax) ayaa isna sheegay in hawlgalkan uu qayb ka yahay hawlgaladii Shabaab looga saarayay gobolkaasi.
10 Al-Shabaab ah oo lagu qabtay Toora-Toorow